पहिलो महिला ट्याक्सी चालकको श्रीमानसँग डिभोर्सपछि बदलिएको जीवन
6341045 376220 3078401 2886424
५ जेष्ठ २०७६, आईतवार १५:१८
ईश्वरी थापा । उनी हुन्, नेपालको पहिलो महिला ट्याक्सी चालक । जब उनले ट्याक्सी चलाउन सुरु गरेकी थिइन्, मानिसहरुले उनलाई नराम्रो नजरले हेर्ने गर्थे । महिला भएर यस्तो पनि काम गर्छ ? भनेर हियाउथे । त्यस्ता कुरालाई वेवास्ता गर्दै उनले यो पेशा अंगालिन् । नेपालको पहिलो महिला ट्याक्सी चालक बनिन् ।
उनले त्यतिबेला हिम्मत नगरेको भए सायद उनी ट्याक्सी चालक हुन्थिनन् होला । कसैको घरमा सानो तिनो काम गरेर वा अरु नै काम गरेर गुजारा चलाइरहेकी हुन्थिन् होला । उनको यहि हिम्मत र आँटले नै अहिले उनी समाजको उदाहरणीय पात्र बनेकी छिन् ।
उनलाई लाग्छ, मानिसलाई दुःख परेपछि केहि गर्ने आँट आफैं आउने रहेछ । श्रीमानसँग सम्बन्धविच्छेद भएपछि छोरीको जिम्मेवारी पनि उनको काँधमा आयो । घरखर्च चलाउन, कोठाभाडा तिर्न, छोरीको लालनपालन गर्न त्यति सजिलो थिएन । मासु पसल चलाउँदै आएकी ईश्वरीलाई घर खर्च चलाउन गाह्रो हुन थाल्यो । अब केहि गर्नुपर्छ भनेर उनले महिनाको १२ हजार तिरेर ५ महिनासम्म गाडी चलाउन सिकिन् ।
१३ वर्षको कलिलो उमेरमा विवाह गरेकी उनले धेरै दुःख भोगिन्, तर उनी दुुःखसँग अलिकति पनि डराईनन् । उनले मनमा एउटै अठोट लिएर हिडिन्, श्रीमानले छोडेको महिलालाई समाजले हेर्ने नजर परिवर्तन गर्नु । एउटा महिला पुरुषविना पनि बाँच्न सक्छिन् । पुरुषको उपस्थितिविना नै छोराछोरीको लालनपालन गर्न सकिन्छ भनेर समाजलाई देखाउन चाहन्थिन् ।
त्यसपछि उनको जीवनले नयाँ गति लियो । पहिलाको दिनमा बिहान बेलुका छाक टार्न मुस्किल पर्ने उनले अहिले आफ्नो छोरीसँगै ५ जना बच्चाहरुलाई सँगै हुर्काइरहेकी छन् । अर्काको दुःख देख्न नसकेर उनले आमाबुवाले छोडेका, आमाबुवा नभएका बच्चाहरुको पालनपोषण गर्दै आएकी छिन् ।
अहिले उनको छोरी कक्षा १२ मा पढ्दैछिन् । पहिला साहुको ट्याक्सी चलाउने इश्वरीले अहिले आफ्नै नयाँ ट्याक्सी जोडेकी छिन् । उनले कक्षा तीन सम्ममात्र पढेकी छिन् त्यसैले छोरीलाई उनले चाहेको विषय पढाउन चाहन्छिन् । उनको पढाईमा कुनै कमि हुन दिएकी छैनन् ।
महिला चालक हुँदा धेरै चुनौतीः
हरेक बिहान ६ बजे उनी कोठाबाट निस्की सकेकी हुन्छिन् । बेलुका ९ बजे सम्ममा घर पुगिसकेकी हुन्छन् । यो उनको दैनिक रुटिन हो । हप्तामा एक दिन आफ्नो शरिरलाई आराम दिन्छिन् । कहिलेकाही ट्याक्सी चालक भएपछि प्यासेन्जरले जहाँ लग्छन् त्यहि जानुपर्ने हुन्छ । यस्तोमा राती अबेरसम्म पनि काम गर्नुपर्ने हुन्छ ।
दिनरात नभनी सेवा दिने ट्याक्सी चालकहरु सुरक्षित छैनन् । ट्याक्सी चालकहरुलाई लुट्ने, मार्ने घटनाहरु भइरहँदा उनलाई आफुले अपनाएको पेशा गलत पो छ कि भन्ने लाग्छ । यस्तोमा सरकारले उनीहरुको सुरक्षाको जिम्मा लिनुपर्ने बताउँछिन् । उनलाई दुईपटक लुटिसकेका छन् । सरकारले ट्याक्सी चालकहरुको हकहितको लागि केहि नगरेको उनको गुनासो रहेको छ ।
काठमाडौंको खाल्डा खुल्डीमा गाडी हाँक्न त्यति सजिलो कहाँ छ र ? त्यो माथी महिला चालक देखेपछि ट्रिपर र ठूला गाडीहरुले पनि पेल्ने । ट्राफिकको ज्यादती पनि त्यस्तै । मुख छाड्ने, अपशब्द बोल्ने र तँ भन्दै हेप्ने प्रवृतिले उनको चित्त दुख्ने गरेको छ । उनलाई सबैभन्दा चित्त दुख्ने कुरा भनेको ट्राफिक प्रहरीको बोल्ने शैली हो । ट्राफिक प्रहरी त आफुलाई मात्र मान्छे गन्ने अरु सबैलाई जनावर सम्झने उनको ठहर छ ।
ishwari Thapa, Nepali Taxi, taxi, women taxi driver, ईश्वरी थापा, ट्याक्सी, पहिलो महिला ट्याक्सी चालक, श्रीमान
Prevबैतडीको नानीगाडमा जीप दुर्घटना हुँदा ३ जनाको मृत्यु
निर्देशक दिपा बस्नेतको संयोजकत्वमा ‘आर्ट अफ गिभिङ’ दिवस मनाइयोNext
कलेज लाइफ मस्तीको एलाइभ
बिरामी लिएर पोखरा जाँदै गरेको ट्याक्सीलाई खोलाले बगायो
श्रीमानको कुटाइबाट श्रीमतीको ज्यान गयो
यात्रु ठग्ने १२ हजार ७ सय ट्याक्सी चालक कारबाहीमा